ဖခင်များနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးမည့်ထူးဆန်းသောကိရိယာများ။ | Androidsis
မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင်စိန့်ဂျိုးဇက်၏နေ့သည်ဖခင်များနေ့လည်းကျင်းပသည်။ ထိုအရေးကြီးသောနေ့၌အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ရန်အတွေးအခေါ်များစွာရှိပြီးယနေ့ Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့သင်တင်ပြသည် စပ်စု gadgets အပေါ်အကောင်းဆုံးအပေးအယူ သူ့ကိုအံ့သြဖို့ပဲ။
အမေဇုံတွင်ရရှိနိုင်သောကမ်းလှမ်းချက်များကကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ခုတည်းသာမကအချို့ကိုပင်ဝယ်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤကိစ္စတွင်အကြံဥာဏ်သည်ယခုအချိန်တွင်သင်လိုအပ်သောအရာကိုသိရှိရန်နှင့်ထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည် ဖခင်များနေ့အတွက်အဖုံးတစ်ခု, powerbank သို့မဟုတ်တိပ်ရီကော်ဒါတစ်ခုပင်.
2 အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာစပ်စု powerbanks
3 Pendrives ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်အတော်လေးစပ်စု
6 အလွန်ကြီးမားသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူစပ်စုမိုဘိုင်း charger ကို
Silver HT - ဖြစ်ရပ်မှန် ...
ရပ်တည်ချက် function ကိုအတူဖုံးအုပ်ထား
သင်၏တက်ဘလက်သည်မပျက်စီးစေရန် Tpu ဆွဲကပ်ချိတ်များ
Keyboard သည်တက်ဘလက်နှင့် microusb ကြိုးဖြင့် android 4.0 နှင့်အထက်သို့မဟုတ် Windows os များနှင့်ဆက်သွယ်သည်
EasyAcc Universal အမှု ...
၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်ခြင်း၊ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်ခြင်းကိစ္စတွင်သင်သည်ကွဲပြားသောပံ့ပိုးမှုထောင့်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပြုပြင်နိုင်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သားရေကွင်းများ၊ elastic band ၄ ခုသည်သင်၏တက်ဘလက်ကိုခိုင်မာစွာနှင့်လုံခြုံစွာပြုပြင်နိုင်သည်
၁၀ လက်မတက်ဘလက်အများစုနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကိရိယာအတွက်10ºအကာအကွယ်ကိုအပြည့်အဝပေးသည်။
DURAGADGET အဖုံး / ကီးဘုတ် ...
နှစ်ဖက်စလုံးရှိ tabs များကြောင့်သင်၏တက်ဘလက်ကိုပြproblemနာမရှိဘဲချိန်ညှိနိုင်သည်
သတိပေး! ၎င်းသည်စပိန်ကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင်ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သည်။
ယူအက်စ်ဂီယာ ၉.၇ လက်မ (၂၄.၆၄ စင်တီမီတာ) ...
BUILT-IN SCREEN PROTECTION: capacitive touch screen protector ဖြင့်တက်ဘလက်ကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
FLEXARMOR NEOPRENE ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ။ အားဖြည့်သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းမှ ... မှဖြစ်ပေါ်လာသော ...
CAR MOUNTING - ပါ ၀ င်သည့်သိုင်းကြိုးသည်သင်၏တက်ဘလက်ကိုကားထိုင်ခုံနောက်ကွယ်တွင်ပြသရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Cooper Backlight Case ...
BACKLIT KEYBOARD နှင့်အတူ LEATHER အဖုံး - kickstand၊ folio အမျိုးအစားနှင့်အရည်အသွေးမြင့် vegan သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ တိုးတက်ပါစေ ...
7-8 "TABLETS အတွက် UNIVERSAL ALL-IN-ONE CASE-Android, Windows, iPadOS နှင့် iOS7မှ 8" တက်ဘလက်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
BRIGHT BACKLIT KEYBOARD - QWERTY အပြင်အဆင်ပါသောကီးဘုတ်၊ တက်ဘလက်များအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ LED backlight သည် ...
Secure Grip CLAW CASE - တက်ဘလက်ကို universal scratch ခြစ်ရာခြေသည်းများကြောင့်ခိုင်မြဲစွာကိုင်ထားလိမ့်မည်။
ဖုန်းတွင်ဘက်ထရီမရှိဘဲလမ်းပေါ်တွင်နေခြင်းသည် Powerbank ရှိပါကအကြောင်းပြချက်တော့မဟုတ်ချေ၊ အများစုသည်သင်၌ရှိသည့် mAh ပေါ် မူတည်၍ အားသွင်းစရာတစ်ခုမှများစွာသောအားဖြင့်ပေးသည်။ တယ်လီဖုန်းအတော်များများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားသည်။ ချိတ်ဆွဲထားခြင်းနှင့်မထိတွေ့မိစေရန် terminal ကိုမကြာခဏအားသွင်းထားသည့်အခါမကြာခဏအသုံးပြုနိုင်သည်။
X-DRAGON နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဘဏ် ...
အားသွင်းချိန် - 20000mAh စွမ်းရည်မြင့်မားပြီး iPhone 86ကြိမ်အဆ၊ iPhone5ကိုအကြိမ် 8 ကြိမ်၊ galaxy s4 XNUMX+ ကြိမ်သို့မဟုတ် ...
Premium Solar Panel လေးခု - ရိုးရာနိမ့်ကျသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆိုလာပြားများနှင့်မတူဘဲ ၄ ပြားဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊
Dual charging နည်းပညာများ - နေရောင်ခြည်နှင့်နံရံအပေါက်များသို့မဟုတ် charger မှအားသွင်းခြင်း။
Dual Output: 2.4A နှစ်ခုလုံးကို USB ports များမှကောင်းစွာကာကွယ်ထားပြီးရာဘာထုပ်များဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
ပါဝါဘဏ် 25000mAh ...
【စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်】: iPhone X - ၇ ကြိမ်၊ iPhone7မှ ၈ ကြိမ်၊ Samsung S8 - 8 အားသွင်းနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးထားသည်။
OU DOUBLE USB OUT 】: ပြင်ပဘက်ထရီသည်စက်နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းအားသွင်းနိုင်သည်။
AST FAST SPEED 】: ဒီပြင်ပဘက်ထရီက 2.1A output တစ်ခုပါ ၀ င်ပြီးသင့်ဖုန်းကိုနှုန်းထားအတိုင်းအားသွင်းပါမယ် ...
HYPER Perla သည် ...
2 ကြေးမုံ (ပုံမှန်နှင့် 3X ချဲ့) ။ 3000mAh လီသီယမ်ပိုလီမာဘက်ထရီ။
မှောင်မိုက်၌မိတ်ကပ်ခွင့်ပြုပါရန်ချဲ့ထွင်သောအချည်းနှီးသောပတ်ပတ်လည်ရှိတောက်ပသော LED အလင်းလက်စွပ်
2.1A iPhone, iPad, Android သို့မဟုတ်မည်သည့် USB စက်ကိုမဆိုအားသွင်းသောမြန်နှုန်းမြင့် USB port
ပုလဲကိုယ်တိုင်သည် micro USB မှတဆင့်ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သည်။4အဆင့် LED ဘက်ထရီအဆင့်ကိုညွှန်ပြချက်။
elzle ပြင်ပဘက်ထရီ ...
2019 26800 mAh / 99 အဆင့်မြှင့်ထားသောဗားရှင်း 16 Wh ဆိုလာပါဝါဘဏ် စျေးကွက်တွင်အကြီးဆုံးစွမ်းရည်သည် ...
charging charging အားသွင်းနည်းနှစ်ခုနှင့်အမြန်အားသွင်းနည်းပညာ】 Elzle Solar ကို 5V / 2A adapter ဖြင့်အားသွင်းနိုင်သည်။
【လုံခြုံရေးအကာအကွယ်စနစ်များစွာနှင့် IPX6 ရေစိုခံ】ဤနေရောင်ခြည်သုံးပြင်ပဘက်ထရီသည် IC အတွက်ကာကွယ်ပေးသည်။
LED LED LEDs ၁၈ လုံး (ပုံစံ ၄ မျိုး၊ ပုံမှန် / ပျော့ / strobe / SOS) 】ဤဆိုလာဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာတွင် LED မီးလုံးနှင့် ...
ခရစ်စမတ်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် [Qi ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်] သည်အပြင်ပန်းဝါသနာရှင်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ကြံ့ခိုင်ပြီးကြာရှည်ခံ: BLAVOR ၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဘဏ်သည် IPX4၊ splash-proof ...
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေများ - ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးဆောင်နိုင်သောဘက်ထရီသည်5V / 2,1 A USB output, ...
 [ဆိုလာပြား] သဘာဝပေးသောအခမဲ့၊ သန့်ရှင်းပြီးအကန့်အသတ်မဲ့စွမ်းအင်ကိုရယူပါ။ ဆိုလာပြား ...
သူတို့နှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အချက်အလက်များကိုမျှမျှတတမြန်ဆန်စွာလွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အတူပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိသေးပါ။ Pendrives သည်ဖုန်းများအတွက်ပြင်ပဘက်ထရီကဲ့သို့သောအခြေခံအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကွန်ပျူတာများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်စမတ်ဖုန်းများအပါအဝင်အခြားကိရိယာများနှင့်အလုပ်လုပ်ပါက၎င်းတို့သည်အလွန်အသုံးဝင်သောလက်ဆောင်ဖြစ်နိုင်သည်။
2.0GB USB 64 Flash Drive ...
သဟဇာတဖြစ်ခြင်း - Pendrive သည် USB 2.0 နှင့် USB နှင့် operating systems အမျိုးအစားများ (Windows 7, Windows 8, ... ) နှင့်သဟဇာတဖြစ်မည်။
ရရှိနိုင်သောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု - ၅၈ GB မှ ၅၈.၂GB၊ စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောစွမ်းရည်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ...
Idealism - USB ချောင်းသည်တစ်နေ့တာတွင်ဖခင်၊ ကလေး၊ မိသားစု၊ အစ်ကို၊ သား၊ သူငယ်ချင်းများအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်အလွန်ကောင်းသည်။
ယုံကြည်မှု - ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကိုအာရုံစိုက်ပြီးလုံခြုံရေးကမ်းလှမ်းသည်။ USB flash drive သည်အကောင်းဆုံးအစစ်အမှန်စွမ်းရည်ကိုသုံးသည်။
Garrulax USB မှတ်ဉာဏ် ...
USB 2.0 ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် - data transfer မြန်နှုန်း - 8MB / S အမြန်နှုန်းမြန်နှုန်း; အမြန်နှုန်း 16MB / S ကိုဖတ်ပါ ....
Windows 2.0 / 98SE, Me / 98 / XP, VISTA, 2000 ကွန်ပျူတာများတွင်စံသတ်မှတ်ထားသော USB7port အားလုံးနှင့်သင့်တော်သည်။ ...
LEIZHAN USB 2.0 မှတ်ဉာဏ် ...
USB USB port ဖြင့် plug နှင့်ကစားရုံဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခု ...
💎 Package တွင် 32GB flash drive ပါဝင်သည်။ Windows XP / Windows7/ Windows 8 / Windows 10, MacOS X နှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်း ...
2.0 USB XNUMX သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ, ဒေတာများမြန်နှုန်း။ ဓါတ်ပုံများသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် ...
💎လုံခြုံစိတ်ချရမှု - အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲဖျက်မိခြင်း၊ အချက်အလက်များကို ၁၀ နှစ်ကြာသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ခံနိုင်ရည် ...
32G Flash Drive -
ခိုင်ခံ့သောအခြေအနေတွင်သိုလှောင်ထားပြီး shockproof နှင့် electromagnetic proof ဖြစ်သည်။
ရုပ်ပုံများ၊ သီချင်းများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားဖိုင်များကိုသင်လျင်မြန်စွာသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
16GB Pen Drive သတ္တု ...
သင်၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများသို့မဟုတ်သင်၏ဗီဒီယိုများကိုနားထောင်ရန်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာကိုစပီကာဖြင့်တပ်ဆင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်တိကျသောရုပ်ရှင်၊ တေးဂီတဗီဒီယိုကလစ်များကြည့်ရှုလိုပါကသို့မဟုတ်ကမ္ဘာ့မည်သည့်နေရာမှမဆိုရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုကိုနားထောင်လိုပါက၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
PTH-800 Bluetooth Speaker ...
တီဗီမိုဘိုင်းဖုန်း၏အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြင့် Bluetooth စပီကာသည်အကန့်အသတ်မရှိဖန်တီးမှုဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ...
အရည်အသွေးမြင့်သောအသံ - မြင့်မားသောသစ္စာခံအသံ၊ ဘေ့စ်လျော်ကြေးပေးသည့်ဒီဇိုင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း / ... ကြည့်ခြင်း။
လက်မ ၆ လက်မထက်ငယ်သောစမတ်ဖုန်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
၁။ ပေါင်းစည်းထားသည့် Bluetooth 1 + EDR ကြိုးမဲ့စနစ်။
၂။ Bluetooth အသံ၊ ပြီးပြည့်စုံသောအသံအရည်အသွေးနှင့်ဘေ့စ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
3. ဂီယာအကွာအဝေး: 10 မီတာ။ လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်အခြား Bluetooth ဖွင့်နိုင်သည့်ကိရိယာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
၄။ Bluetooth လက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်၊ ဖုန်းကိုဖြေရန်လွယ်ကူသည်။ Bluetooth တေးဂီတထိန်းချုပ်မှု
Onforu ခရီးဆောင်စပီကာ ...
【【အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြည်လင်သောစတီရီယိုအသံ powerful: စွမ်းအားပြည့် 10w အော်ဒီယိုနှစ်ခုတပ်ဆင်ထားပြီးသင့်အားရှင်းလင်းသောအသံများကိုပေးသည်။ ...
【【 20 နာရီကြာသောထုတ်လုပ်မှု】: ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီနှင့် ၃-၄ နာရီကြာအားပြည့်ရန် ...
5.0 【 Bluetooth 5.0 】 Bluetooth ဗားရှင်း XNUMX သည်ချက်ချင်းတည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှုကိုရရှိစေသည်။ ကိရိယာများကိုထောက်ပံ့သည်။
♫【 IPX5 ရေစိုခံ】 IPX5 စံသတ်မှတ်ချက်အရဒီစပီကာကိုမိုးရွာခြင်းနှင့်မှောက်ခြင်းများမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သဘာဝ ၀ ါးပါသည့်လက်လုပ်ဂီတသေတ္တာ
100% ဟင်းသီးဟင်းရွက်, သဘာဝနှင့်ရေရှည်တည်တံ့
ပတ် ၀ န်းကျင်အသံ, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုမရှိဘဲ
Bluetooth Speaker - ထူးခြားသောအသံ၊ ထူးခြား၊ ဆန်းသစ်မှု၊ ထူးခြားသောဒီဇိုင်း၊ Bluetooth 4.0၊
ရေဒီယို၊ စပီကာအကွက်များပါ ၀ င်သောစပီကာနှစ်မျိုးသုံးကြိုးမဲ့စတီရီယိုဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု၍ ကြိုးမဲ့ Bluetooth စပီကာ ...
Bluetooth စပီကာသည်တွဲဆက်ရန်လွယ်ကူပြီးလည်ပတ်နိုင်အောင်ရိုးရှင်းပါသည်။ မင်းရဲ့စမတ်ဖုန်းဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေကိုတွဲဖက်လို့ရတယ်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံအရည်အသွေး၊ ကြာကြာပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းဘဝ - ၄၀၀၀ mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီမှ ...
မိုဘိုင်းဖုန်းအထောက်အပံ့ ၎င်းသည်ကားတွင်ဖြစ်စေအိမ်တွင်ဖြစ်စေအသုံးပြုရန်အလွန်ကောင်းသည့်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်မှုကိစ္စများအပါအ ၀ င်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာရှိသည်နှင့်အရှည်အတော်လေးတိုတိုမရှိကြပေ။
LONZOTH အတွက် ...
★အလွန်အဆင်ပြေသည်: 90 cm gooseneck length; ယခုသင်သည်အဆင်ပြေစွာထိုင်။ သုံးနိုင်သည် ...
★ Handyhalter, Lazy Bracket: မည်သည့်စားပွဲ၊ ခေါင်းစဉ်၊
★သင်သည်မည်သည့်အရာဝတ္ထု၏အရွယ်အစားကိုမဆိုပြုပြင်နိုင်စေရန်ထိန်းညှိနိုင်သောလှည့်လက်ကိုင်။ စားပွဲ၊ အိပ်ရာ၊
★ Foam Pad Non-slip ကလစ် - သင်၏ဖုန်းကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်သင်၏ရုံးထိုင်ခုံကိုထိခိုက်စေခြင်းစသည် ...
UGREEN Tablet နှင့် ...
4-12.9 လက်မတက်ဘလက်များနှင့်မိုဘိုင်းများအတွက် - ဒီတက်ဘလက်လက်ကိုင်က ၄ လက်မမှ ၁၂.၉.၉ တက်ဘလက်များနှင့်စမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့သော ...
Metal Arm Support နှင့်360º Head: တည်ငြိမ်သောအလူမီနီယမ်လက်နက်များဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော screw နှစ်ခုသုံးခုတပ်ဆင်ထားသည်။
Reinforced Arm System: ဒီလက်မောင်းတက်ဘလက်ရဲ့ heavy duty metal clamp ကို ...
သင့်စားပွဲအတွက်ဘက်စုံကိုင်တွယ်ခြင်း - ဇယားကွက်သည်ဘက်ပေါင်းစုံ ဖြစ်၍ ၎င်းကိုဒေါင်လိုက်နေရာချနိုင်သည်။
Cut Hang ဟန်ပုံစံ ...
လည်ပင်းပုံစံ: Hang cutout ပုံစံသည်သင်၏ဖုန်းကိုကိုင်ရန်၊ ဗီဒီယိုကြည့်ရန်၊
: ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်လည်လည်ပတ်နိုင်သည့်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးပျင်းရိသည့် biegbare လည်ပင်းဖုန်းကိုင်ရန်လွယ်ကူသည်။
ပစ္စည်း - ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သောလက်ကိုင်ကွင်းခတ်သည်အရည်အသွေးမြင့်သောလူမီနီယမ်အလွိုင်းနှင့် ABS ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ...
လုံခြုံစွာအသုံးပြုခြင်း - လက်ကိုင်အိတ်အတွင်းရှိသင်၏ကိရိယာများနှင့်အတူရာဘာဖြင့်ခြစ်ရာများမှ ...
Tryone မိုဘိုင်းအထောက်အပံ့ ...
【မှတ်စု you သင်သည်ဖုန်းအကြီးတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြင်ပဘက်ထရီကိုအသုံးပြုပါကသင်၏ကိရိယာသည် ... နှင့်မကိုက်ညီပါ။
size ဖုန်းအရွယ်အစားလိုအပ်ချက် - အမြင့်ဆုံးအကျယ်သည် ၃ လက်မ (၇၆ မီလီမီတာ) ဖြစ်သင့်သည်။ စပွန်ဆာ ...
【အရှည်】 ၂၇.၅ လက်မ (၇၀ စင်တီမီတာ) အရှည်ရှိပြီး flex flex သည် ၂၁.၅ လက်မ (၅၅ စင်တီမီတာ) ဖြစ်သည်။
【 Spring Clip3၃ လက်မ (၇၅ မီလီမီတာ) ထူသောကိရိယာများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
TRYONE တက်ဘလက်လက်ကိုင် ...
【ညွှန်ကြားချက်များ this ဤထုတ်ကုန်သည်သင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဖတ်ခြင်းအတွက်သာသင့်တော်ကြောင်းသတိပြုပါ။
【အသုံးပြုမှုသိကောင်းစရာများ】 ၁။ သင်ကလေးလံသောတက်ဘလက်ကိုထောက်ပံ့ရန်အသုံးပြုလျှင်၊ ရေပိုက်ကို "S" ပုံစံနှင့်ညှိရန်အကြံပြုသည်။
Baseus သံလိုက်ကိုင်ဆောင်သူ ...
☀ဆန်းသစ်သောသတ္တုကိုယ်ထည်များ - Baseus Magnetic Mounting Bracket သည်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
☀ခိုင်ခံ့သောသံလိုက် Adsorption --- ဒီကားတောင်ကိုပုံမှန်သံလိုက်မှအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ...
signal အချက်ပြမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသော --- Neodymium သံတွင်ပိတ်ထားသောသံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
☀ 360 ° Stereo Rotation --- သံလိုက်ကားတောင်သည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားပြီး ...
အလွန်ကြီးမားသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူစပ်စုမိုဘိုင်း charger ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကိုအားသွင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းအားသွင်းမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မကြာခဏအလုပ်များလေ့ရှိသော်လည်းဤကိစ္စတွင်ထုတ်လုပ်သူများစွာရှိပြီး USB port များစွာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ မူရင်းအိမ်မှာများသောအားဖြင့်အငယ်စားအားဖြင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်ရွေးချယ်သူများစွာရှိသည်။
USB ထုတ်ကုန် ၁၀ ခုအထိအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းမှတစ်ပြိုင်တည်းအားသွင်းပါ။ မည်သည့်စက်ကိုမဆို plug လုပ်ပါ။
Sabrent USB Charger သည်အကြမ်းခံ။ ပေါ့ပါးပြီးအိမ်၌ဖြစ်စေ၊ ရုံး၌ဖြစ်စေကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကအဖော် ...
အိုင်ပက်၊ အိုင်ဖုန်း၊ iPod၊ စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
IWAVION အားသွင်းစက် ...
၃၀ Watt Wall Fast Charger သည် QC30 ports များဖြစ်ပြီး ၃၅ ခုတွင် ၀ မှ ၈၀% အထိအလျင်မြန်ဆုံး USB charging နည်းပညာ ...
ဘက်စုံသုံးအားသွင်းခြင်းဒီဇိုင်း - ဒီစမတ်နံရံအားသွင်းစက်သည် ၄ ​​ခုဖြင့်သင်ပစ္စည်း ၄ ခုအထိအားသွင်းနိုင်သည်။
Safe and Durable: USB wall adapter သည်မီးလျှံတားရန်ပစ္စည်းနှင့် built-in လုံခြုံရေးစနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Wide Compatibility: QC 3.0 USB မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းစက်သည်သဟဇာတဖြစ်သောကိရိယာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ရွေးချယ်မှု ပြီးတော့၎င်းသည်တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းဖြစ်စေ၊ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏အကောင်းဆုံးကိုရယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တက်ဘလက်များသည်အားသွင်းရုံဖြင့်လုံလောက်သောစွမ်းအားရှိသည့်တိကျသောအားသွင်းစက်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အဖေနေ့သည်အလွန်အထူးနေ့ရက်ဖြစ်သည်မတ်လ ၁၉ ရက်ဆိုတာသတိရပါ။ စပိန်မှာမိဘတွေအတွက်နည်းပညာလက်ဆောင်တစ်ခုဝယ်ယူတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကိုသတိရပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးနေ့စဉ်သုံးနိုင်တာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အဖေများနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးလိုသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကိရိယာများ
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ရဲ့ဘက်ထရီအခြေအနေကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ